इन्दिरा गान्धीका ‘सेक्स पार्टनर’ उनकै निजी सचिव – Contemporary News Portal From Nepal
इन्दिरा गान्धीका ‘सेक्स पार्टनर’ उनकै निजी सचिव
प्रकाशित मिति: ७ भाद्र २०७४, बुधबार १९:४५
भारतमा इन्दिरा गान्धीलाई आइरन लेडी पनि भन्ने गरिन्छ । उनकै कार्यकालमा पाकिस्तान टुक्रा पार्ने मिसन सफल भएको थियो ।
इन्दिराका पीता जवाहरलाल नेहरुका निजी सचिव थिए एम.ओ. मथाई । १९४६ देखि १९५९ सम्म नेहरुको साथमा रहेर मथाईले सहयोग गरेका थिए ।
तर नेहरुका निजी सचिव इन्दिरा गान्धीका अति निजी बन्न पुगे । मथाईले एक पुस्तक लेखेका छन्, जसको नाम हो ‘रेमिनेन्सेन्सस अफ त नेहरु एज’ । जुन कितावमा नेहरु परिवारलाई मथाईले नंग्याएका छन् ।
‘सि’ भन्ने च्याप्टरमा मथाईले इन्दिरा गान्धीसँग आफ्नो यौन लिलाबारे खुलेर लेखेका छन् ।नेहरु परिवारप्रति मथाईले अगाध श्रद्धा भएको उल्लेख गरेका छन् ।
साथै उनले नेहरु परिवारका सदस्यहरुको भित्री कुरा पनि लेखेका छन् । नेहरुको सम्बन्ध एडविना, पद्मजा नायडु, मृदुला सराभाइ र अन्य महिलाहरुसँग रहेको खुलासा गरेका छन.।
नेहरु यी महिलाहरुसँग धेरै व्यस्त हुँदा देश नै भूल्थे । जसका कारण १९६२ मा भारत र चीन बीच भएको युद्ध चीनको पक्षमा गयो । मथाइले आफूले १२ वर्षसम्म इन्दिरा गान्धीसँग यौन लिला गरेको र त्यो क्रममा एक पटक उनी गर्भवती भएको लेखेका छन् । त्यो गर्भलाई पतन गराइयो ।
एक पटक इन्दिराले भनिन कि म तिमीसँग रातभर सुत्न चाहन्छु । मथाईले त्यसबेला उनलाई जवाफ फर्काएका थिए, ‘मलाई यस्तो अनुभव छैन ।’ त्यसपछि इन्दिराले मथाईलाई डा. अब्राहमको स्टोन एबाउट सेक्स र फिमेल एनाटोमी भन्ने दुई किताब दिएकी थिइन् ।
इन्दिरा गान्धी सबैभन्दा बढी त ओछ्यान मै खुल्छिन् । उनलाई फ्रान्सेली कलात्मक सेक्स मन पथ्र्यो । र उनलाई त्यो भन्दा पनि लामो बेरसम्म ‘टङ किस’ मन पथ्र्यो । एकदिन इन्दिराका योगा शिक्षक धीरेन्द्र ब्रम्हचारीसँग उनी रासलिल मच्चाउँदै गरेको अवस्थामा फेला परिन ।
त्यसपछि मथाईले भने कि म तपाईलाई केही कुरा भन्न आएको थिएँ । तर भैहाल्यो, पछि भन्ने छु । इन्दिरालाई कुनै एक पुरुषबाट यौन प्यास मेटिन्न थियो । जसका कारण उनी फरक फरक पुरुषसँग रमाउने गर्थिन । धीरेन्द्र ब्रम्हचारीसँगको सम्बन्ध देखेपछि मथाईले इन्दिरासँग सम्बन्ध तोडे ।
‘पोस्टकार्डस न्यूज डट कमबाट -एजेन्सी ।
७ भाद्र २०७४, बुधबार १९:४५ मा प्रकाशित